Xafladii 1da Agoosto oo baaqatay & khilaaf siyaasadeed oo Garoowe ka Jira. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Xafladii 1da Agoosto oo baaqatay & khilaaf siyaasadeed oo Garoowe ka Jira.
Xafladii 1da Agoosto oo baaqatay & khilaaf siyaasadeed oo Garoowe ka Jira.
August 1, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garoowe (HM):- Dowladda Puntland oo dhismaheedii laga joogo mudo 20 sano ah,waxaa guud ahaan laga diyaar garoobay magaalooyinka waweyn si loo xuso munasabadda 1 agoosto oo ah xilli ku adan 20 guuradii dhashada Puntland 1998.
Waxaa caasimadda Puntland ee Garoowe bishaan kusoo qulqulayey marti katimi gudaha & dibadda Puntland oo lagu casumay ka qaybgalka munasabadd weyn ee dhalashadii dowladda Puntlan.
Nasiib daro waa baaqatay oo ma dhicin in la xuso, waxaan jirto cid xukuumadda Puntland kamid ah oo u sharaxday ummadda Puntland sababta baajisay xafladda,waxase Jira warar lagu kalsoonyahay oo sheegay in uu jiro khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay Madaxda Puntland & tan Dowladda Faderalka Soomaaliya, iyadoo ay wali garowe kusuganyihiin wafdiga uu horkacayo raisalwasaare xasan cali kheyre.
Maanta inteeda badan waxaa aqalka madaxtooyadda Puntland kulan uga socday xukuumadda iyo xubno ka tirsan golayaasha kale ee dowladda oo uu shir gudoominayo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali,waxaana lagu falanqeeyey munasabadda 1-da Agoosto, Shirka Golaha wasiiradda Faderalka oo hore loo qorsheeyey in Garoowe lagu qabto maalinta khamiista ah, iyadoo ay hore u dhacday in shirka golaha lagu qabto hadba meel kamid ah caasimadaha Maamul goboleedyadda Soomaaliya.
Shirka oo waqti badan qaatay waxaa kasoo baxay in aan munasabadu qabsoomin iyo in aan la qaban shirkii loo balansanaa ee xukuumadda Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre, magaaladda Garoowe waxaa galinkii danbe iyo caawa ka socda kulamo gooni-gooni ah oo arintaas ku adan wallow aanay jirin xal rasmi ah oo laga gaaray.
Goor danbe oo caawa ah war soo gaarey Horseed ayaa sheegaya in shirkii xukuumadda federaalku beri oo khamiis ah ka dhacayo wasaaradda Maaliayadda.
Khilaafka ayaa la sheegay in ay salka ku hayso kadib markii uu ka baaqday dhagax dhigga dakadda Garacad Raisal wasaare Xasan Cali Kheyre oo la sheegay in ay jadwalkiisa kamid ahayd.
Galinkii danbe ee manta waxaa garoonka diyaradaha ee Gen Maxamed Abshir Garowe kasoo degay xubno katirsan golaha wasiiradda Dowladda Faderalka Soomaaliya oo u yimi Puntland in ay kaqayb galaan shirka golaha xukuumadda PM Xasan Cali Kheyre,waxayse arintu u badan tahay in ay wafdi dib ugu laabtaan magaaladda muqdisho.
wixii warar ah ee kazoo kordha arintaan wararkeena danbe Ayaan idiin kusoo gudbin.